အန်းဝက်နဲ့ပွဲ ပထမပိုင်း အပြီးမှာပဲ ၁၁ ယောက်လုံးကို လူစားလဲပစ်ချင်ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို – MySport Myanmar
အန်းဝက်နဲ့ပွဲ ပထမပိုင်း အပြီးမှာပဲ ၁၁ ယောက်လုံးကို လူစားလဲပစ်ချင်ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းကတော့ ယနေ့မနက်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ရိုင်ရယ် အန်းဝက် နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ် မှာ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲ ၁ ဂိုး ဂိုး မရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ရှုံးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စပါးအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို ကတော့ ဘာမှ စောဒက တက်စရာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မောင်ရင်ဟို အနေနဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ကစားသမား ၁၁ ယောက်လောက် အထိ လူစားလဲချင်ကြောင်းနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာ ကို ထိုက်တန်တယ်လို့ မြင်ကြောင်း ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ပါဝင် ကစားခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ လိုဆယ်ဆို၊ စတီဗင် ဘက်ဂ်ျဝင်း၊ ကားလို့စ် ဗီနီးဆီးရပ်စ် နဲ့ ဒယ်လီ အလီ တို့ကို ဒုတိယပိုင်း အရောက်မှာ လူစားလဲခဲ့ပြီးတော့ တိုက်စစ်မှူး ဂါရတ်ဘေးလ် ကိုလည်း ၅၈ မိနစ်အရောက်မှာ လူစားလဲခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်တော် ဖြစ်နိုင်ရင် ၁၁ ယောက် အထိ လဲချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ငါးယောက်လုံး တစ်ပြိုင်နက် မလဲရဲခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် လက်ကျန် ၄၅ မိနစ်မှာ အပြောင်းအလဲ လုပ်စရာ အခွင့်အရေးမရှိမှာ ကြောက်လို့ပါ။ ရှုံးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြစ်တင်စရာ လူတစ်ဦးပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ လူက ကျွန်တော်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ပွဲအစပိုင်းအတွက် လူတွေ ရွေးခဲ့တယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ကစားပုံကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ ပထမပိုင်းမှာပဲ အသင်းက စိတ်ဓာတ်ကျ သွားခဲ့ပါပြီ။ ပထမ ပိုင်းမှာ ကစားရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ နေရာလွတ်တွေ အများကြီး ရခဲ့တယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ဘက် အသင်းကလည်း ကစားပုံ လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အဲ့ဒါက လုံးဝ ကို ခက်ခဲ ခဲ့ပါတယ်။ အဆုံးမှာတော့ အန်းဝက် က သူတို့ နဲ့ ထိုက်တန်တာကို ရသွားတယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ ထိုက်တန်တာကို ရသွားပါတယ် ”
“ ရလဒ်က မျှတပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ အကောင်းဆုံး အသင်းက နိုင်ပြီးတော့ အဆိုးဆုံး အသင်းက ရှုံးနိမ့်သွားတာပါ။ မင်းအနေနဲ့ ငါတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်းက ဘာလဲဆိုတာ သိပါတယ်။ မင်း ငါသိတာနဲ့ အတူတူပဲ မင်းသိပါတယ်။ လူတိုင်းလည်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမား‌တွေ အနေနဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အသင်းမှာ ကစားသမားကောင်းအများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူတို့ကို အခွင့်အရေးပေးရမှာက ကျွန်တော့် တာဝန်ပါ။ နောက်ပွဲတွေ ထပ်ကစားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမာက သူတို့ တာဝန်ပါ။ ဒီနေ့ညကြောင့် ကျွန်တော့် အတွက် နောက်ပွဲတွေမှာ လူရွေးချယ်ဖို့ လွယ်ကူသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တာဝန်ယူမှု တစ်ခုတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကစားသမားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ တာဝန်ယူမှုပါ ”
ဒယ်လီ အလီ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးတဲ့ အခါမှာတော့ “ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို နာမည်တပ်မပြောချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒါမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ ကစားသမားတွေ အနေနဲ့ ကစားပုံ ဆိုးရွားတယ်လို့ ပြောရင် မျှတမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်ယောက်ချင်းစီ နာမည်တပ်ပြီး ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော့်ထက်ကို ဒီအလုပ် လုပ်ရတာ ပိုနှစ်သက်‌နေတဲ့ပုံပဲ။ ခင်ဗျားတို့က အမြဲတမ်း ဘာလို့ ဒီကစားသမားက မကစားရတာလဲ ? ဘာလို့ ဒီကစားသမားကို မရွေးတာလဲ ? တစ်ချိန်လုံး ကျွန်တော့်ကို မေးနေခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဒီမေးခွန်းကို မေးဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး ထင်တယ်။ ဘာလို့ဆို အခု ခင်ဗျားတို့ သိသွားပြီလေ။ မင်းက အသင်းမှာ ပထမဦးစားပေး ကစားသမားဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိပြီးတော့ အရေးကြီးတဲ့ ပွဲမှာ ကစားခွင့်ရရင် မင်းအနေနဲ့ ခြေစွမ်း ပြကို ပြရမယ်။ ဒါက သိသာတဲ့ အဖြေပဲ။ လူတိုင်း အတူတူလုပ်နေကြတာပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်း အတူတူဆင်းတယ်။ တူညီတဲ့ အရာကို သင်ယူရတယ်။ ဒါပေါ့ ကျွန်တော် နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပေါ့ ” လို့ ပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-10-30T13:13:29+06:30October 30th, 2020|Europa League, Football, Premier League|